IINKCUKACHA ZOMUNTU ESIBENZA
Xa u tyelela iSayithi, siqokelela ngokuzenzekelayo ulwazi oluthe ngqo malunga nefowuni yakho, kubandakanywa ulwazi malunga nesiphequluli sakho sewebhu, idilesi ye-IP, indawo yexesha kunye nezinye iifiki ezifakwe kwisixhobo sakho. Ukongezelela, njengoko ukhangela iSayithi, siqokelela ulwazi malunga namaphepha ewebhu ngamnye okanye iimveliso ozijongayo, yiziphi iiwebhsayithi okanye amagama okukhangela ekubhekiselelwe kwiSayithi, kunye nolwazi malunga nendlela osebenzisana ngayo neSayithi. Sibhekisela kule ngcaciso eqokelelwa ngokuzenzekelayo njenge-"Information Information".
Siqokelela ulwazi lweDivayisi ngokusebenzisa ubu buchwepheshe:
- "I-cookies" ziifayile zeedatha ezifakwe kwisixhobo sakho okanye kukhompyutha kwaye zihlala ziquka i-identifier engaziwayo. Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nekhukhi, kunye nendlela yokukhubaza ikhukhi, tyelela i-http: //www.allaboutcookies.org.
- "Iifayile zelogi" izenzo ezilandelwayo kwiSayithi, kwaye uqokelele idatha kuquka idilesi yakho ye-IP, uhlobo lwesiphequluli, umnini-nkonzo wesevisi ye-intanethi, iphepha lokuphuma / ukuphuma, kunye neesitampu zosuku / ixesha.
- "ii-beacons zewebhu", "i-tags", kunye ne "pixels" ziifayile zekhompyutha ezisetyenziselwa ukurekhoda ulwazi malunga nendlela ophengulula ngayo iSayithi.
- [[BHEKA IZICWANGCISO ZAMANYE AMA-TYPES OF TRACKING TECHNOLOGIES]]
Ukongezelela xa uthengwa okanye uzama ukuthenga ngeSayithi, siqokelela ulwazi oluthile oluvela kuwe, kubandakanya igama lakho, idilesi yokuthengisa, idilesi yokuthumela, ulwazi lweentlawulo (kuquka namanani ekhadi lesikweletu [[FUNDA NAKWANYE AMANQAKO OKUSEBENZISWA KWEMALI] ), idilesi ye-imeyile kunye nenombolo yefowuni. Sibhekisela kule nkcazelo "njengeNkcukacha zoMyalelo".
[[BONEKA NGANYE OKUNYE IINKCUKACHA EZIKHULULEKILEYO: IINKCUKACHA ZONYAKA)
Xa sithetha "ngeNkcukacha Zomntu" kule Mgaqo-nkqubo weMfihlo, sithetha zombini malunga neNkcazelo yolwazi kunye neNkcukacha zoLwazi.
SISEBENZISA KANJANI IINKCUKACHA ZAKHO?
Sisebenzisa iLwazi loMyalelo esiyiqokelela ngokubanzi ukuzalisekisa nawuphi na umyalelo obekwe kwiSayithi (kubandakanya ukucwangcisa ulwazi lwakho lokuhlawula, ukulungiselela ukuthunyelwa, kunye nokunikezela nge-invoyisi kunye / okanye ukuqinisekiswa komyalelo). Ukongeza, sisebenzisa le Lwazi loLwazi kwi:
- Xoxa nawe;
- Inkcazo yethu imiyalelo yengozi okanye ukukhwabanisa; kwaye
- Xa uhambelana nezikhetho owabelane ngazo nathi, sikubone ngolwazi okanye iintengiso eziphathelele kwimveliso okanye iinkonzo zethu.
- [[BENZA OKUNYE OKUSEBENZIWA NGOKWENZA IINKCUKACHA]]
Sisebenzisa iCandelo leNkcukacha esiziqokeleyo ukuze zisincede sikhenkcele ingozi kunye nokukhwabanisa (ngokukodwa, idilesi yakho ye-IP), kunye nokubanzi ngokubanzi ukuphucula nokuphucula iSayithi sethu (umzekelo, ngokuvelisa i-analytics malunga nendlela abathengi bethu bakhangela ngayo kwaye badibene kwiSayithi, kwaye ukuvavanya impumelelo yemveliso yethu yokuthengisa kunye neentengiso).
[[QAPHELA OKUNYE OKUSEBENZISWA NGEZICACISO ZENGCACISO, KUBANYE: UKUQHUBA / UKUQALA)]
UKUBHALISA IINKCUKACHA ZAKHO
Sibelana ngolwazi lwakho lomntu kunye nabantu abasithathu ukuze sincede sisebenzise iinkcukacha zakho zobuqu, njengoko kuchaziwe ngasentla. Umzekelo, sisebenzisa i-Shopify ukwenza amandla esitolo sethu kwi-intanethi - ungafunda ngokubanzi malunga nendlela i-Shopify isebenzise ngayo iinkcukacha zakho zobuqu apha: https://www.shopify.com/legal/privacy. Sisebenzisa i-Google Analytics ukunceda siqonde indlela abathengi bethu basebenzisa ngayo iSayithi - unokufunda ngakumbi malunga nendlela iGoogle isebenzisa ngayo ulwazi lwakho lomntu apha: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Unokuphuma kwakhona kwi-Google Analytics apha: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ekugqibeleni, nathi sinokwabelana ngeNkcukacha zakho zoBuntu ukuthobela imithetho nemigaqo efanelekileyo, ukuphendula kwisigxina, umyalelo wokukhangela okanye esinye isicelo esisemthethweni solufumanayo okanye ukukhusela amalungelo ethu.
Njengoko kuchaziwe ngasentla, sisebenzisa iNgcaciso yakho yoBuntu ukukunika izikhangiso ezijoliswe kuyo okanye ukuthengiswa kwezothutho esiyakholelwa ukuba unokunomdla kuwe. Ukufumana ulwazi oluninzi malunga nokukhangisa okujoliswe kuyo, ungatyelela iphepha lokufundisa leNkqubo yokuThengiswa kweNethiwekhi ("NAI") kwi http://www.networkadvertising.org/intelligent-online-advertising/how-does-it-work.
Unako ukuphuma ngaphandle kwintengiso ejoliswe kuyo ngokusebenzisa izikhonkwane ezingezantsi:
- I-Google: https: //www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/reources/policies/personalized-ads
- [[KUNYE NOKUXHUMA KWEENKONZO ZOKUSEBENZA KWEENKONZO EZISEBENZISWA]]
Ukongezelela, unako ukuphuma kwezinye zezi nkonzo ngokutyelela i-portal yokuphuma ye-Digital Advertising Alliance kwi-http: http://optout.aboutads.info/.
Nceda uqaphele ukuba asiyikuguqula idatha yokuqokelela idatha yeSayithi kunye nendlela yokusebenzisa xa sibona uphawu lokungazilandeli kwi-browser yakho.
Ukuba ungumhlali waseYurophu, unelungelo lokufumana ulwazi lomntu siqu esinalo ngalo kwaye ucele ukuba ulwazi lwakho lomntu lulungiswe, luhlaziywe okanye lususwe. Ukuba ungathanda ukusebenzisa leli lungelo, nceda uqhagamshelane nathi ngokusebenzisa ulwazi oluqhagamshelwano apha ngezantsi.
Ukongezelela, ukuba ungumhlali waseYurophu siyaqaphela ukuba siqhuba ulwazi lwakho ukuze sizalise izivumelwano ezinokuthi sinakho nawe (umzekelo ukuba wenza umyalelo ngeSayithi), okanye ngenye indlela ukuba ulandelelanise iimfuno zoshishino ezibhalwe ngasentla. Ukongeza, nceda uqaphele ukuba ulwazi lwakho luya kudluliselwa ngaphandle kweYurophu, kuquka neCanada ne-United States.
Xa ubeka umyalelo ngeSayithi, siya kugcina i-Order yakho yeeNkcukacha kwiirekhodi zethu ngaphandle kokuba ucele ukuba ususe le ngcaciso.
Singahlaziya lo mgaqo-nkqubo we-ngasese ukwenzela ukuba sibonakalise, umzekelo, utshintsho kwizenzo zethu okanye kwezinye izizathu zokusebenza, zomthetho okanye izigwebo.
[[QAPHELA UKUBA UKUTSHATSHWA KWEMIGAQO YOKUBA KUFUNEKA]]
I-Site ayijoliswe kubantu ngabangaphantsi kweminyaka yobudala [[HLAWULA IXA]].
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e‑mail at shopsoiehair@gmail.com or by mail using the details provided below:
[I-Re: Igosa lokuthobela Ubumfihlo]
XNUMX Powers Ferry Rd Marietta Georgia US XNUMX